Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato kalluunka digaagga | Kalluunka
Maqaalka maanta waxaan si qoto dheer ugu ogaan doonnaa noocyada badda ee loo yaqaan Kalluunka digaagga. Waa mid ka mid ah kalluunka ugu awoodda badan badda dhexdeeda waana arrin soo jiidasho leh oo caqabad ku ah kalluumeysiga cayaaraha. Adiga oo leh awood aad u tiro badan, way adag tahay in la kalluumeysto haddii aadan xirfad ama xirfad ku lahayn usha. Marka, hab lagu tijaabiyo naftiisa, kalluunkani waa kalluun badan. Magaceeda cilmiyaysan waa Lepidorhombus boscii.
Marka lagu daro xooggeeda wanaagsan iyo soo jiidashada kalluunka kalluumeysiga, waxaad ku baran kartaa maqaalkan dhammaantiis ku saabsan bayoolaji, astaamo, dabeecad, iwm. Marabtaa inaad waxbadan kabarato kalluunka roosterfish? Kaliya waa inaad sii wadataa akhriska.
2 Range iyo deegaan
3 Quudinta iyo tarbinta kalluunka
4 Kalluumeysiga isboortiga Roosterfish
Sida la mid ah kaluunka Waxay leedahay jidh aad u ballaadhan oo ka dhigaya mid ku habboon kalluumeysiga. Culeyskiisu waa 80 rodol, cabirkiisuna waa 3 mitir. Muunadani weyn waa mid baahi loo qabo, in kasta oo ay run tahay in tallaabooyinkani ay aad u kala duwan yihiin. Waxay kuxirantahay aagga wax lagu qeybiyo meesha ay ku taal, wey weynaan doontaa ama way yaraan doontaa.
Jidhku guud ahaan waa dheer yahay waana weyn yahay oo leh muuqaal gaar ah. Oo waxaa lagu cadaadiyey qaybta hore. Madaxiisu waa dheer yahay dhabarkuna waa xoog badan yahay, waana xagal yahay. Afku wuxuu leeyahay qaab jajab ah waxaana lagu calaamadeeyay xarriiq marinaysa labada indhood oo qumman.
Gelitaanka afkeeda, waxaan helnaa daan leh ilko yaryar oo soo baxa oo leh 18 gill oo ku yaal dhinaca hoose ee daanka. Qeybta kore ee gill waxay ku leedahay 12 ka mid ah brachispines-ka.
Sida midabka, waxay soo bandhigaysaa midab buluug ah oo buluug ah oo lagu dhex daray qadar lacag ah jidhkiisa oo dhan. Dhibcaha ay ku leedahay dhabarkiisa iyo masarka ayaa ka dhigaya inay xitaa si fudud u kala duwanaan karto. Waxay leedahay 2 slats oo ka soo baxa fin finka oo u sii gudubta finka dabada iyo kan kale ee ka soo baxa lafdhabarta ilaa dhamaadka dabada.
Range iyo deegaan
Noocani wuxuu deegaan wadaag la yahay kalluunka liinta. Badanaa waxaa lagu arki karaa deegaanno u dhow dhulka xeebta ah. Wuxuu had iyo jeer raadsadaa inuu dego meelaha u dhow dhagaxyada waaweyn si uu uga raadsado meelaha ciidda badan leh. Halka kalluunkani uu gabaad ka dhiganayo meelaha ciidda badan leh, kalluunka liinta ayaa ku wehelinaya adiga oo badda ku jira.
Mararka qaar waxaa laga heley iyada oo laga dhisey cidhifyada qaar xeebaha, estuaries iyo xitaa lagoons. Markay weli da 'yar yihiin oo ayna si buuxda u horumarin, waxay ku noolaan karaan biyo hoose oo aan dhibaato lahayn.
Waqtiga sannadka ee aragtidiisa iyo kalluumaysigeeduba aad u badan yihiin waa bilaha Juun ilaa Sebtember. Thanks to dhaqdhaqaaqyada xirfada leh ee ay sameyn karto, waxaa awood u leh in lagu arko meelaha ay ka mid yihiin afafka wabiga, meelaha dhagaxa badan iyo meelaha mowjadaha adag leh.
Quudinta iyo tarbinta kalluunka
Kalluunka “Roosterfish” wuxuu leeyahay xawaare aad u badan marka uu ka gudbo badda. Waad ku mahadsantahay awoodiisa ugaarsiga wuxuu quudin karaa kaluunka noocyadiisa kala duwan dhexdooda waxaan ka helaynaa dibiga ama kalluunka naxaasta ah.
Xiisaha xiisaha leh ayaa ah in haddii kalluunkan ay yihiin waqtiyo marka heerka ugaadhsiga uu hooseeyo oo ay bilaabaan inay si macno darro ah u gaajoodaan, waxay aakhirka u soo jeestaan ​​cunista dadka. Waxay ku darsadaan cunnadooda muunado isku nooc ah marka lagu daro ku xadgudubka sardines-ka iyo kalluunka koi, oo ay si joogto ah u ceyrsanayaan illaa la qabto oo la cuno.
Isku dheelitirnaanta waxay dhacdaa inta u dhexeysa bilaha Luulyo illaa dhammaadka Febraayo. Waa waqtiga ay taranku marayo heerkii ugu sarreeyay. Beedka dhigiddu waxay u dhici kartaa dhowr siyaabood. Mid baa ku jira waqtiga laga bilaabo dabayaaqadii Ogosto ilaa Nofeembar. Midda labaad waa Febraayo ilaa Abriil. Waqtigani wuxuu kuxiranyahay daqiiqada ay iskula jaanqaadeen isla markaana waqtiga ukunta samaysmay ay dhaaftay.
Bacriminta Roosterfish waa dibedda. Sida noocyadeeda badankood, waxay ku dhashaa aagag qoto dheer maaddaama ay dareemayaan badbaado badan. Guud ahaan waxay raadiyaan meelo ku dhow xeebta oo aan qoto dheer lahayn. Shiil ka soo baxa ukunta waxay leeyihiin qaabab isku mid ah waxayna ku ekaadaan dusha sare illaa ay ka gaarayaan qaan gaar.
Markay horumaraan, waxay maraan isbeddello taxane ah. Muuqaalka ayaa ka duwan oo si tartiib tartiib ah u lumiya iskudhafkaas kor ku xusan. Markuu go'aansado inuu aado badda hoosteeda, wuxuu sidaa sameeyaa si uu isu dhiso ugu yaraan ugu yaraan labo sano.
Kalluumeysiga isboortiga Roosterfish
Kalluunkan ayaa aad ugu guuleysta adduunka kalluumeysiga isboortiga. Kaluumeysatada waxa ay aad u raadiyaan waa caqabadaas adag ee laga gudbo taasna waxay ka dhigeysaa inay cadeeyaan xirfadahooda kalluumeysi. Qiyaasta ugu badan ee kalluumeysiga xayawaankan wuxuu dhacaa bilaha Maarso iyo Abriil, marka aysan ku jirin taranka buuxa.
Kalluumeysiga ganacsiga si loo iibiyo hilibkooda waa la dhammeeyay iyadoo la adeegsanayo farsamada isdaba-marinta inta u dhexeysa 100 ilaa 500 mitir oo qoto dheer. Suuqgeynta ayaa kordhay madaama ay caan ku noqotay kaluumeysiga isboorti. Tijaabooyinka ugu yar ee la kalluumaystay waa 25 cm. Farsamo kale oo loo adeegsado soo qabashadeeda waa khadka dheer. Aad ayey muhiim u tahay in meelaha ay aad ugu soo kordhaan kalluumeysigeeda loo diyaariyo si loo yareeyo saameynta deegaanka ee ay ku yeelanayso.
Meelaha u dhigma Waqooyiga Atlantik waa meelaha ay suuragal ka ahayd in lagu soo qaado muunado waaweyn oo dhererkoodu yahay 140 cm. Si kastaba ha noqotee, badda Mediterranean waxaa ku jira tijaabooyin kale oo cabirkoodu yar yahay. Meelaha sida aadka ah looga kalluumeysto waa Gacanka Cádiz, Badda Cantabrian iyo Waqooyi Galbeed.
Dhibaatada ku dhacda sidii had iyo jeer noocan oo kale ah, ayaa ah in noocyada kale ee kalluunka la helo marka bartilmaameedku yahay roosterfish. Intaa waxaa dheer, waxay baabi'isaa qaab-dhismeedka badda iyo noocyada algae.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto kalluunkan caanka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Kalluunka » Kalluunka digaagga
Waad salaaman tihiin, warbixin aad u wanaagsan. Calan kaliya cayayaanka. Magaca sayniska waa Nematistius pectoralis.
Jawaab Hugo Yev